Mutambo webhodhi Con 2022: "2G" uye nenzvimbo yebhizinesi - poindi yemutambo - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | February 15, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, Fair report, nhau, Events
Iyo Brettspiel-Con 2022 muBerlin yakarongerwa kuitika kubva Chikunguru 15 kusvika 17. Chiitiko chakatangwa nebhodhi mutambo vapesvedzera "Hunter & Cron" (ikozvino: Hunter & Shamwari) chichaitika kechinomwe. Nekuda kwedenda rekorona, mitemo ye2G inofanirwa kushanda. Uye chimwe chinhu chitsva: nzvimbo yebhizinesi inoitirwa kuunza iyo indasitiri pamwechete.
Mushure mekudzimwa kwechiitiko muna 2020 uye chiitiko chakaderedzwa kuvhurazve pasi pemamiriro edenda munaGunyana 2021, Berlin Board Game Con ichadzokera kuzuva rayo rekutanga, varongi vazivisa. Gungano iri rakarongwa kuti riitwe kubva musi wa15 Chikunguru kusvika 17, 2022 uye kechinomwe.
Berlin Con inoita "bhizinesi"
Mufaro wemurongi Johannes "Hunter" Jäger wakakurawo: "Kuna 2022 tese tinoshuvira kudzoka kune zvakajairika uye isu tinotarisira kuita mupiro kune izvi neBerlin Con muzhizha".
Hutachiona hwekorona huri kuramba huchitekeshera muGermany, asi huwandu hwehutachiona hunogona kutanga kudzoka kumashure. Vanoronga veBerlin-Con vane tariro yechokwadi yechiitiko "chakajairika". Chirongwa chakazara chakarongwa nehoro yevaratidziri yakakurisa yevatsikisi nevatengesi, nzvimbo yemitambo yemahara ine zvigaro chiuru uye yemahara yekurojesa mitambo, nzvimbo yekutamba yenharaunda yevatambi vebhodhi, musika webhodhi mutambo, nzvimbo yemakwikwi uye prototype gallery yevanyori. . "Nzvimbo yakakosha yemitambo yekutamba nepeni iri kudzoka neRatCon Berlin," anodaro Jäger.
Parizvino, mamiriro ekubvumidzwa kweBerlin Con 2022 anotarisirwa kuramba akasimba. "Kunyangwe budiriro yedenda ichivimbisa kumwe kuzorora kwemwedzi mishoma iri kutevera, Berlin Board Game Con uye kutengeswa kwematikiti parizvino kuri kuitwa se2G. chiitiko,” varongi vanotsanangura . Nekudaro, isu tinochengeta kodzero yekuita shanduko.
Chinhu chitsva gore rino chichava rudzi rwenzvimbo yebhizinesi. Boka rekuronga rinotsanangura: Kekutanga, chiitiko chitsva chekutanga chinonzi "B2Brett" chichatanga kuBerlin Con. MuHotera yakatarisana yakatarisana neAletto, vaparidzi vane mukana wekupa hunyanzvi hwavo kune vamiriri vevatori venhau uye nekurima maindasitiri ekusangana.
Ichi chikamu chakanyatsogadzirwa kuitira vezvenhau, kutengeserana uye vamiriri vanotsikisa kuti vakwanise kusangana kure nemhere mhere uye mhere-mhere yekutengeserana fair fair uye kupa vanodyidzana navo mubhizinesi mukana mutsva wetiweki. Anofurira Sven Siemen, anomhanyisa chiteshi cheBrettballett, ari kuseri kwezano. Anotsanangura achiti:
“Kunyangwe mutambo webhodhi wakura zvakanyanya panguva yedenda, kuonana nemunhu kwakarasika zvakanyanya. Zvakare kufona kwevhidhiyo uye zviitiko zvedhijitari zvinoshanda, isu tese tinoshuva kuchinjana pachedu nevatinoshanda navo. Kunyangwe pasina denda, isu tinogara tiine vacuum yezviitiko zveindasitiri muzhizha, nekuti pakati peNuremberg Games Fair uye GAME muEssen zvishoma zvinoitika. Ne "B2BRETT" tinoda kukurudzira chikamu chebhizimisi paBerlin Con, nokuti nekuda kwekuswedera pedyo nemutambo wegore chiitiko, vazhinji vemabhizimisi uye vamiririri vezvokutengeserana vachange vari panzvimbo muBerlin.
Uye ichave iri nhoroondo kuBerlin Con 2022: Kekutanga munhoroondo yeBerlin Con, mubairo we "Game of the Year" uchapihwa mune chimwe chiitiko muBerlin neMugovera manheru, Chikunguru 16. “Tinotarisira kupemberera anenge akunda pamwe chete kuBerlin Con neSvondo,” chinodaro chikwata ichi.
Matikiti ari kutengeswa kubva muna Kukadzi 16. Vanoronga vanodaidza 59 euros semutengo wetikiti remwaka, unosanganisira iyo "Game Nights" neChishanu neMugovera. Pane zvidzikiso zvevatangi vemabhuku: Kekutanga, Berlin Brettspiel Con iri kupa matikiti akaderedzwa.
Kuderedzwa uku kunoshanda kuvana kubva pa5 kusvika kumakore gumi nemana, vadzidzi, vadzidzi, vadzidzi, vanotsvaga basa vane mabhenefiti ari pasi peALG I, vakaremara zvakanyanya (dhigirii rekuremara kweanenge makumi mashanu), vanotora penjeni, vanowana rubatsiro rwemagariro, EU pensioners ( = vakaremara mudyandigere), vanhu vanoita basa rekuzvidira, Vane berlinpass uye kadhi reruremekedzo Berlin-Brandenburg. Vana vanosvika uye vanosanganisira makore mana ekuzvarwa vanogashira mahara.
Kunze kwezvidzikiso ibheji rakaganhurirwa, iro, pamusoro pekubvumidzwa neMugovera neSvondo, rinopawo mukana we "GameNight" neChishanu neMugovera manheru nevimbiso yechigaro. Gore rino tiri kupa mwedzi mitatu yekutanga shiri chikamu kubva Kukadzi 16 kusvika Chivabvu 16, 2022 yebheji.
Svondo, Chikunguru 17 izuva remhuri zvakare uye vana vese vanosvika makore gumi nemana vanopinda mahara kana vachiperekedzwa nemunhu mukuru.
Ruzivo nezveBerlin Con uye mitengo yematikiti inowanikwa online pa www.berlin-con.de.
Kare Areka Yakarasika: Server pasi - Update iri kuuya
Inotevera Asmodee inoshuma rekodhi kukura: Rimwe gore rakabudirira
WWE 2K Nzvimbo dzekurwira Kugadziridza: Yenhoroondo Wrestlers uye Zvitsva Zvirimo
Kutengesa paImba paChikomo: Yechitatu Edition yasvika
Nintendo Chinja munzira yekubudirira +++ Animal Kuyambuka: New Horizons nhamba yekutengesa inogutsa
Kutya kweCyberpunk 2077 kwakapararira